Book Lonavala Khandala Tour Package | Dana pa: + 91-993.702.7574
Lonavala isiteshi chechikomo chine zita rinonzi jewel ye Sahyadri Mountains pedyo neMumbai mu Maharashtra. ILonavala Khandala Tour Package inokupa mukana wekuona chimwe chinhu chakanaka uye chakanakisa, kutakura bhegi rakazara nemangariro. Kuwanda kwezvinhu zvakasikwa mumhando yemvura inoputika, matanda anoyevedza nemipata, nzvimbo dzakasvibirira, makungwa nemapako ekare inoita Lonavala mini paradhiso uye yakakwana kuenda kune imwe nzvimbo yakazara yehupenyu hweguta. Rwendo urwu ruchakuendesa kunzvimbo dzakasvibirira dzakasvibirira, maonero uye masvingo akafukidzirwa mumarinda munzvimbo yese. Lonavala anosvika muupenyu munguva monsoon season sezvo mhirizhonga inosvibira bhuruu rakasvibira nemvura nemvura. ILonavala Khandala Tour Package yakagadzirirwa vanhu vanotarisira kushandisa imwe nguva munzvimbo dzakanaka dzekumadokero ghats. Iko ghats nemipata yeLonavala neKandala zvakanaka uye zvakanyarara zvinogona kuita kuti mufambiro wako wose unofadza. ILonavala Khandala Tour Package inopa nzvimbo yakakwana yekuzorora panzvimbo iyo munhu anogona kuva nenguva yakanakisisa yehupenyu hwavo. Zvivako zvezvikomo muKhandala zvakaona kusimudzika nekuwa kweumambo hwakawanda hwakafanana neMarathas, Peshwas uye kunyange simba rehurumende yezvekuEurope. Nzvimbo dzeSvondo Mabhanji Nhufambi iri kupa 10% kutora purogiramu yeZuva reIndendence. Tinopa imwe inonakidza yeLonavala Khandala Tour Package yakakodzera kune vakaroorana, shamwari kana mhuri.
Nekushanya kwedu, unogona kuva nerwendo rwezororo rwehupenyu hwako hwawakambofunga. Isu tinoita kuti iwe uve nechiitiko chakanakisa chezororo neyekuyeuka kwehupenyu hwose.
Mutambo Wokushanyira: 245
ZUVA 01: MUMBAI -LONAVALA
ZUVA 02: LONAVALA
ZUVA 03: LONAVALA- KHANDALA - LONAVALA
ZUVA 04: LONAVALA- MUMBAI (DEPARTURE)